Prairie Cardiovascular: Ndị ọkà mmụta obi na Illinois na Òtù Ahụ Ike Obi
Ihe nrite Prairie CARE
Gịnị mere Prairie
Hụ Gị n'Asaa
Netwọk mgbu obi
Ọgwụgwọ pụrụ iche
Ụlọ ọgwụ Valve
Ablation nke obi
Ịwa ahụ CT
Ọrịa akwara dị n'akụkụ
Ụlọ ọgwụ varicose vein
Chọta dọkịta na APC
Ndụ Ahụ Ike
Nleta Ọfịs Virtual dị ugbu a na Prairie Cardiovascular - MỤTAKWUO
Achọrọ ihe mkpuchi ihu n'oge nhọpụta gị
Cheta iweta ihe mkpuchi ihu na ọkwa gị!
A ka na-achọ ihe mkpuchi n'ebe obi Prairie niile dị na Illinois.
Emere nyocha. Egosiri. Onye ndu.
Ndị ọkachamara nkụchi obi #1.
Hazie nhọpụta gị ugbu a!
Adịla ọrịa vein n'efu!
Were nyocha ahụike Vein
Karịrị obi gị.
Ọ bụ ihe anyị na-eme ebe a.
Chọta dọkịta gị ugbu a!
Nleta Ọfịs Virtual dị ugbu a na Prairie Cardiovascular
N'oge nsogbu COVID-19, Prairie Cardiovascular nwere obi ụtọ ịnye nleta otu ụbọchị na ụbọchị na-esote maka nchekwa na ịdị mma nke ndị ọrịa anyị.
Ka ịtọọ oge ọhụhụ, biko kpọọ
Chọta Dọkịta Prairie
Chọta dọkịta obi Prairie Ugbu a
Chọta dọkịta gị
Rịọ ka e mee oge
Nhọpụta nke otu ụbọchị na ụbọchị ọzọ dị
Ndị ndu na nlekọta obi
Mgbe ịchọrọ karịa dọkịta, mgbe ịchọrọ ọkachamara obi, Prairie Heart nwere azịza ya. Site na cholesterol dị elu ruo ọbara mgbali elu, aneurysms ruo arrhythmia, mgbu obi na nlekọta obi, ndị ọkachamara na Prairie Heart dị njikere iguzo n'akụkụ gị n'oge njem gị niile iji nweta obi dị mma.
Hazie nhọpụta gị ugbu a
Dejupụta fọm n'okpuru.
Prairie Cardiovascular bụ onye ndu mba n'inye oke mma, obi ọgbara ọhụrụ na nlekọta akwara ozi. Ime oge gị na ndị dibịa bekee na ndị APC agaghị adị mfe.
Site na anyị ACCESS Prairie mmemme, a na-eziga arịrịọ gị maka oge atọrọ na nzuzo na ndị otu nọọsụ zụrụ azụ nke obi. Ha ga-enye gị enyemaka ahaziri onwe gị n'ime oge gị na Dọkịta na APC nke kacha mma maka ịgwọ obi gị na mkpa akwara.
Mgbe ịmechara fọm ahụ, a ga-ezigara ndị otu anyị ozi e-mail echedoro anya ACCESS Prairie ndị nọọsụ. Ị ga-enweta oku nloghachi n'ime ụbọchị azụmahịa 2.
Ọ bụrụ na ị chere na nke a bụ ihe mberede, biko kpọọ 911.
Site na dejupụta fọm ahụ, ị ​​kwenyere ịnata nzikọrịta ozi sitere na Obi Prairie.
Abụ m onye ọrịa ọhụrụ.
Koodu mpaghara *
Ụbọchị ọmụmụ * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / EYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Nọmba ekwentị kọntaktị *
dibia bekee na APC (nhọrọ)
Ebe akwadoro (nhọrọ)
Ihe kpatara ị na-arịọ ọkwa *
Ma ọ bụ Kpọọ anyị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgwa mmadụ okwu ozugbo, enwere ike ịkpọtụrụ onye nọọsụ site na ịpị 217-757-6120.
Akụkọ na-akpali anyị. Akụkọ na-enyere anyị aka inwe mmetụta nke njikọ na ndị ọzọ. Akụkọ bụ akụkụ nke ihe ka anyị onwe anyị. N'obi ha, akụkọ na-enyere anyị aka ịgwọ ọrịa. Anyị na-akpọ onye ọ bụla ka ọ gụọ akụkọ dị n'okpuru ma gbaa ndị ọrịa anyị na ezinụlọ ha ume ịkọrọ akụkọ Prairie nke onwe ha.
Ọzụzụ CPR Naanị Aka
Mgbe Steve Pace dara n'ala, nwunye ya Carmen kpọrọ 9-1-1 wee malite ozugbo mkpakọ obi. O jighị n'aka na ọ na-eji usoro kwesịrị ekwesị eme ihe, mana ndị dọkịta, ndị nọọsụ na ndị na-aza ajụjụ mbụ kwetara na ngwa ngwa ya mere ka ọ zọpụta ndụ Steve, na-edebe ya ndụ ruo mgbe ụgbọ ihe mberede rutere.
Site n'ike mmụọ nsọ nke akụkọ nke echiche ngwa ngwa nke Carmen, ndị otu nọ na Prairie Heart Institute malitere ọzụzụ "Idebe ijeụkwụ - Aka naanị CPR" iji wetara obodo dị mfe usoro nzọpụta ndụ.
Aka naanị CPR bụ ndị American Heart Association na-atụ aro maka ndị na-eguzo na-azụbeghị na CPR. A na-atụ aro ya maka ọnọdụ mgbe onye nnapụta na-enweghị ike ma ọ bụ na-achọghị ịnye ikuku ventilashị ọnụ na ọnụ.
Ka ilele vidiyo Pace, ka ịmatakwu ma ọ bụ rịọ maka nnọkọ CPR Naanị Aka na mpaghara gị, biko bọtịnụ dị n'okpuru.
Defibrillator Cardioverter Extravascular (EV ICD), Hypertrophic Cardiomyopathy.
Jitters ọrụ ọhụrụ bụ ihe nkịtị. Mana were were malite ọrụ ọhụrụ site na onye na-eme ihe ngwa ngwa - nke mbụ na United States na nke abụọ n'ụwa niile ka etinyere ya site na iji teknụzụ nyocha iji gwọọ egwu obi ngwa ngwa. [...]
Mgbanwe Aortic Valve
Achọrọ m iwepụta oge wee sị daalụ ndị otu TAVR !!! Ha pụtara ìhè n'ọtụtụ ọkwa! Ọ malitere n'April nke afọ 2013. Ọgọ nna m na-atọ ụtọ, Billy V. Williams, nọ na-ada mbà ma mesịa gwa ya na ọ metụtara obi ya. Mgbe ọtụtụ ule gasịrị, mkpebi ndị […]
AKW, Catheterization nke obi, obi Pain
Nna m nwụnahụrụ m na Feb. Mgbe m bụ nwata, ana m ahụ papa m mgbe niile ka onye a na-apụghị imeri emeri. Ọ bụ onye nchekwa m, onye nkuzi ndụ m, dike m!! Dị ka onye toro eto, achọpụtara m na ọ nwere ike ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-anọ, mana amaara m ogologo oge ọ na-eje ije na nke a […]
Anyị bụ ndị ọhụrụ
Ihe ikpeazụ ị chọrọ bụ ịwa ahụ nke chọrọ ogologo oge mgbake. Na Prairie Heart, anyị bụ ọkachamara na ịwa ahụ ọhụrụ, nke na-adịghị adịte aka nke na-abụghị naanị na-arụ ọrụ ahụ, kamakwa na-eme ka ị laghachi azụ ịbụ gị ngwa ngwa karịa usoro omenala.
Mụtakwuo ma nweta nri nri
Nlekọta nso n'ụlọ gị
A gọziri anyị ibi na mpaghara nwere obodo siri ike nke anyị nwere ahụ iru ala na afọ ojuju. Ma mgbe anyị nwere nsogbu obi nke nwere ike ịchọ nlekọta pụrụ iche, ọ na-apụtakarị na anyị na-eche nhọrọ nke ịhapụ obodo anyị ma ọ bụ nke ka njọ, na-ewepụ nlekọta. Nke a abụghị ikpe mgbe ndị dọkịta nke Prairie cardiologists nyere gị nlekọta pụrụiche. Nkà ihe ọmụma anyị na Prairie Heart Institute bụ inye nlekọta dị ka o kwere mee na mpaghara. Ọ bụrụ na nke ahụ agaghị ekwe omume, mgbe ahụ na naanị mgbe ahụ, a ga-atụ aro njem.
Chọta dọkịta na APC nso gị
Na mgbakwunye na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ saịtị 40 na gburugburu Illinois ebe ndị ọkachamara n'ọrịa obi Prairie na-ahụ ndị ọrịa na ụlọ ọgwụ mpaghara, enwere mmemme pụrụ iche na Springfield, O'Fallon, Carbondale, Decatur, Effingham na Mattoon.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbaàmà nke nkụchi obi, Kpọọla ụgbọala.
Biko kpọọ 911 chere maka enyemaka.
Kpọọ, Anyala ụgbọala
N'afọ a naanị, nde ndị America 1.2 ga-enwe ihe mberede obi. N'ụzọ dị mwute, ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrịa a ga-anwụ tupu ha erute n'ụlọ ọgwụ maka otu ihe kpatara ya - igbu oge na ịnweta ọgwụgwọ ahụike dị mkpa.
MGBE mgbu obi na-eme, mara ihe - na-akpọ oku mgbe niile, akwọla ụgbọala.
Ọtụtụ ndị ọrịa obi nkụchi obi kwọra onwe ha ma ọ bụ nwee onye ezinaụlọ ya buuru ha gaa ụlọ ọgwụ. Obi dị m ụtọ na enwere ụzọ isi nyere aka belata ọnụ ọgụgụ ndị a na-emebi emebi. "Ọ bụ Oge Oge" bụ mmemme nke Chest Pain Network nke Prairie Heart Institute of Illinois (PHII) mepụtara, na-ejikọta ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ EMS maka nlekọta kachasị ngwa ngwa na nke kacha mma maka ndị ọrịa mgbu obi. Kpọọ 911 mgbe niile maka enyemaka ahụike - akwọla onwe gị - mgbe mgbaàmà ịdọ aka ná ntị nkụchi obi na-eme.
Mgbe ị na-ahụ ihe ịrịba ama nke nkụchi obi, sekọnd ọ bụla ị na-echekwa nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti mmebi obi na-adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ ọnọdụ ọgwụgwọ, na ọbụna ndụ ma ọ bụ ọnwụ. Site na ịpị 911 nke mbụ, ọgwụgwọ na-amalite ozugbo ndị na-anabata ihe mberede rutere. Ndị ọkachamara EMS na ndị nzaghachi mbụ ndị ọzọ nwere ike:
Nyochaa ọnọdụ gị ozugbo
Ziga ozi mkpa gị na ozi EKG gị n'ụlọ ọgwụ ọ bụla dị na PHII Chest Pain Network
Na-elekọta ọgwụgwọ n'ime ụgbọ ihe mberede
Gbaa mbọ hụ na ndị otu obi ụlọ ọgwụ ga-echere ma dịrị njikere maka mbata gị
Mee ọsọ ọsọ nke ọma site na mgbaàmà nkụchi obi gaa na ọgwụgwọ
Ndụmọdụ maka nkwadebe maka nleta gị
Jide n'aka na anyị nwere ndekọ ahụike gị
Ọ bụrụ na dọkịta nke gị ezigara gị na Prairie Cardiovascular, ọ ga-akpọtụrụ anyị site na ekwentị ma ọ bụ ziga akwụkwọ ndekọ gị n'ụlọ ọrụ anyị. Ọ dị ezigbo mkpa na anyị ga-enweta ndekọ ahụike gị. Ma ọ bụghị ya, dọkịta na-ahụ maka obi gị agaghị enwe ike nyochaa gị nke ọma ma ọ nwere ike ịdị mkpa ịmegharị oge nhọpụta gị ruo mgbe natara ndekọ ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị kpọtụrụla onwe gị, ị ga-akpọtụrụ dibịa gị wee hazie ka ezipụ ndekọ gị n'ụlọ ọrụ anyị tupu oge nleta gị. Akụkọ ahụike gị gara aga dị mkpa na nyocha na ọgwụgwọ.
Weta ozi mkpuchi gị niile yana akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị
Mgbe gị na anyị mere oge, a ga-ajụ gị maka ozi ịnshọransị gị nke anyị ga-enyocha ya tupu oge ịhọpụta gị. Ịkwesịrị iweta kaadị mkpuchi gị na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị na oge mbụ gị. Ị nwere ike ịmatakwu gbasara amụma gbasara ego anyị site n'ịkpọ ngalaba ego ndị ọrịa ndidi.
Weta ọgwụ gị niile
Biko weta ọgwụ gị niile n'ime akpa mbụ ha mgbe ị bịara n'ọfịs. Jide n'aka na dọkịta gị maara banyere ọgwụ ọ bụla ị na-aṅụ, gụnyere ọgwụ ndị a na-ere ahịa na ọgwụ herbal. Otu ọgwụ nwere ike iso onye ọzọ na-emekọrịta ihe, n'ọnọdụ ụfọdụ na-ebute nsogbu ahụike siri ike. Ị nwere ike ịchọta ụdị dị mfe iji depụta ọgwụ gị niile Ebe a.
Dejupụta akwụkwọ ozi ndị ọrịa ọhụrụ
Ozi a dị ezigbo mkpa ma ga-eme ka usoro ahụ dị ngwa ma ọbịbịa gị na ụlọ ọrụ. Enwere ike ịchọta nnomi nke fọm gị n'okpuru. Ị nwere ike faksị fọm ahụ n'ụlọ ọrụ anyị tupu oge eruo na 833-776-3635. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ibipụta fọm, biko kpọọ ụlọ ọrụ anyị na 217-788-0706 ma rịọ ka ezigara gị fọm ndị ahụ. Dejupụta/ma ọ bụ ilele fọm tupu ọkwa gị ga-azọpụta gị oge.
Nkwenye maka ọgwụgwọ
Mpempe akwụkwọ ntuziaka ikike
Rịba ama nke Omume Nzuzo
Nyocha gị: Ihe ị ga-atụ anya ya
Mgbe ịmechara ndebanye aha gị na onye na-edeba aha nwere ozi gbasara gị dị mkpa yana ozi mkpuchi, onye nọọsụ ga-akpọghachi gị n'ime ụlọ nyocha ebe ọ ga-ewere ọbara mgbali elu na ụbụrụ gị.
Nọọsụ ahụ ga-ewerekwa akụkọ gbasara ahụike gị iji chọpụta ọ bụghị naanị ọgwụ ị na-aṅụ mana ihe, ma ọ bụrụ na ọ bụla, allergies ị nwere ike ịnwe; Kedu ụdị ọrịa mbụ ma ọ bụ mmerụ ahụ ị nwere ike inwe; na ọrụ ọ bụla ma ọ bụ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ị nwere ike ịmela.
A ga-ajụkwa gị gbasara ahụike ezinụlọ gị gụnyere ọnọdụ ihe nketa ọ bụla nwere ike metụtara ahụike obi gị. N'ikpeazụ, a ga-ajụ gị gbasara ọnọdụ alụmdi na nwunye gị, ọrụ gị yana ma ị na-aṅụ ụtaba, mmanya ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla. Ọ nwere ike inye aka dee ihe omume na ụbọchị ahụike gị niile wee weta nke a na nleta gị.
Ozugbo onye nọọsụ gwụchara, onye na-ahụ maka ọrịa obi ga-ezute gị ka ị nyochaa akụkọ ahụike gị wee mee nyocha anụ ahụ. Mgbe ule ahụ gasịrị, ya na gị na ezinụlọ gị ga-ekwurịta ihe nchoputa ya wee kwado nyocha ma ọ bụ atụmatụ ọgwụgwọ ọzọ. Biko nweere onwe gị ịjụ dọkịta gbasara obi ajuju ọ bụla ị nwere ike ịnwe n'oge a. Ndị dibịa anyị na-eji ndị enyemaka dibịa na ndị nọọsụ bụ ndị a zụrụ nke ọma na njikwa obi maka ịhụ ndị ọrịa n'oge ụfọdụ. Ọ bụrụ otu a, dọkịta gị ga-enyocha nleta gị.
Gịnị na-eme ma nleta mbụ ahụ gasịrị?
Mgbe gị na dọkịta na-ahụ maka ọrịa obi gachara, ụlọ ọrụ anyị ga-eziga ndekọ obi obi niile, nsonaazụ ule na aro maka ọgwụgwọ n'aka dibịa na-atụ aka gị. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịhazi ule ndị ọzọ ị ga-achọ ịlaghachi maka ya. Anyị nwere ọtụtụ ule na usoro-ọtụtụ n'ime ha na-adịghị emerụ ahụ-n'aka anyị na anyị enweghị ọbụna afọ 10 gara aga iji nyere anyị aka ịchọpụta nsogbu ma mee ha ngwa ngwa, nke ọma tupu oge obi ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, biko kpọọ nọọsụ onye ọrịa obi gị. N'ihi olu anyị na-akpọ kwa ụbọchị, a ga-eme mgbalị ọ bụla iji weghachi oku gị n'oge. Oku ọ bụla enwetara ka elekere anọ nke ehihie gachara, a ga-eweghachitekarị ụbọchị azụmahịa na-esote.
Enyemaka izugbe dị
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nleta gị na-abịa, biko kpọtụrụ.
Na-arịọ ka ewepụtara ozi ma ọ bụ ndekọ
Usoro nke ngalaba nnabata niile arịrịọ maka mwepụta ozi onye ọrịa. Iji nyere ndị ọrịa aka ịnweta ozi nlekọta ahụike nke onwe ha (nchịkọta ndekọ ahụike siri ike), ndị ọrịa kwesịrị imezu nke ọma Prairie Cardiovascular Consultants Ikike iji na/ma ọ bụ kpughee ụdị ozi echedoro.
Enwere ike iweghachi akwụkwọ ikike niile dechara, bịanyere aka na ya na akara ụbọchị na:
Attn: Ngalaba nnabata
Oge opupu ihe ubi, IL 62701
MA ọ bụ ozi-e: HIPAA2@prairieheart.com
MA ọ bụ faksị ozugbo gaa na ngalaba nnabata: 833-776-3635
Ikike iji na/ma ọ bụ kpughee ozi echedoro
Mpempe akwụkwọ nnabata ikike
Kedu ụgwọ ọrụ metụtara ịrịọ ndekọ ahụike?
PCC na-eme ya ọ bụghị ụgwọ ndị ọrịa, ụlọ ọrụ nlekọta ahụike ndị ọzọ, Ndị dọkịta na APC, ma ọ bụ Ngalaba Veterans Affairs Administration (VAA) maka ịrịọ akwụkwọ ndekọ ahụike ndị ọrịa.
Kedu otu m ga-esi nweta akwụkwọ ndekọ ahụike m?
Ikike iji/kpughee ozi ahụike echedoro ga-abụrịrị onye onye ọrịa ma ọ bụ onye nnọchite anya onye ọrịa ga-abịanye aka.
Iji nweta ikike iji/kpughee ụdị ozi ahụike echedoro pịa Ebe a.
biko pịa Ebe a maka ntuziaka maka otu esi emejupụta ikike iji/kpughee ozi ahụike echedoro.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ibipụta fọm, biko kpọtụrụ anyị site na ozi kọntaktị.
Ozugbo ngalaba nnabata enwetachara ikike nke emechara, bịanyere aka na akara ụbọchị, a ga-ezigara onye nnata ozi a rịọrọ.
Kedu mgbe ikike na-agwụ?
Ikike a ga-agwụ ụbọchị 60 ka ụbọchị mbinye aka ya gachara. Ị nwere ike tinye ụbọchị dị iche na paragraf nke atọ na ibe nke abụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ikike ahụ dị irè karịa ụbọchị 60. Ikike ahụ agaghị adị irè maka oge ọ bụla karịa otu afọ.
Ebee ka m ga-ezigara ikike m dechara?
Biko ziga ikike niile na:
Ntị: Ngalaba nnabata
Gịnị bụ nọmba faksị iji zipu ikike emechara m?
Biko fax ikike gị na 833-776-3635.
Enwere m ike izipu ikike m dechara?
Ee. Enwere ike izipu ikike agwụla e-mail HIPAA2@prairieheart.com
Kedu ihe m kwesịrị iji nweta ndekọ ahụike na onye ọrịa nwụrụ anwụ?
Enwere ike iwepụta ozi ahụike onye nwuru anwu site na arịrịọ ederede sitere n'aka onye nrụzi ma ọ bụ onye nchịkwa nke ala onye ahụ nwụrụ anwụ ma ọ bụ onye nnọchite anya nke onye ahụ nwụrụ anwụ họpụtara.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na enweghị onye nnọchi anya onye ahụ nwụrụ anwụ?
Ọ bụrụ na enweghị onye ọka iwu, onye nchịkwa, ma ọ bụ onye nnọchite anya na onye ahụ ajụghị kpọmkwem ikwupụta akwụkwọ ndekọ ahụike ya na ederede mgbe ahụ enwere ike wepụta ozi ahụike onye nwụrụ anwụ na nnata nke ụdị a: Ụdị Asambodo Ezinaụlọ enyere ikike
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji nweta akwụkwọ ndekọ ahụike m?
Maka ntọhapụ ndekọ ahụike, ọ nwere ike were ụbọchị 30 iji nweta ndekọ gị. Anyị na-ahazi arịrịọ n'usoro natara ha. Agbanyeghị, a na-ahazi nhọpụta, usoro na ihe mberede dị ka arịrịọ STAT.
Anyị nwere ike hazie arịrịọ otu ụbọchị, enyere ndị ọrụ na ozi zuru ezu ma dị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ Ngalaba Nrubeisi ka ịlele ọnọdụ nke arịrịọ gị.
Onye na-ahazi mwepụta ndekọ ahụike m?
Ngalaba nnabata na-ahazi arịrịọ ndekọ niile.
Enwere m ike ịbịanye aka n'akwụkwọ ikike wee buru ndekọ ahụike n'otu oge?
Biko kpọtụrụ Ngalaba Nrubeisi ka ị hazie maka nhazi ndekọ ahụike, oge ị nweta, na ịbanye ikike. Ngalaba nrubeisi ga-achọ oge zuru oke iji hazie arịrịọ ahụ yana hụ na ewepụtara usoro ozi onye ọrịa nke ọma ka emechara.
Onye na-abụghị onye ọrịa ahụ nwere ike iburu ndekọ ahụike m?
Ee, enwere ike ịnyefe onye ọ bụla nrịanrịa akwụkwọ ndekọ aha na ikike. Achọrọ NJ foto mgbe ị na-ebulite ndekọ ahụike.
Enwere m ike iji otu arịrịọ ahụ zipu ndekọ na ebe dị iche iche?
Mba. Anyị chọrọ ikike iche maka ebe ọ bụla.
Achọrọ m ikike dị iche maka dọkịta PCC ọ bụla?
Mba, PCC nwere otu ndekọ ahụike eletrọnịkị. Edebere ndekọ ahụike gị niile n'otu eserese.
Kedu ihe kpatara ikike a ga-eji bụrụ ụbọchị mbinye aka ederede?
Iji nyochaa ikike onye ọrịa ịhapụ ozi ahụike.
Ọ bụrụ na m budata Prairie Heart Institute of Illinois APP na ekwentị m ma ọ bụ mbadamba ma ọ bụ debanye aha maka akwụkwọ akụkọ gị, kedu ka isiri ozi m?
Anyị anaghị anakọta ozi nkeonwe ọ bụla site na Prairie Heart App. A na-echekwa ozi nke itinyere naanị na ekwentị gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka yana Prairie Cardiovascular ma ọ bụ Prairie Heart Institute of Illinois anaghị anakọta ma ọ bụ chekwaa ya n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị banye na akwụkwọ akụkọ anyị, naanị adreesị ozi-e gị ka echekwara maka iziga gị akwụkwọ akụkọ. Prairie Cardiovascular na Prairie Heart Institute of Illinois agaghị ere adreesị ozi-e gị ma ị nwere ike ịpụ n'oge ọ bụla.
Budata ngwa Prairie
Ngwa Prairie Heart Institute na-eme ka ọ dị mfe ijikọ. Site na ịpị bọtịnụ, chọta dọkịta obi Prairie ma ọ bụ weta ntụzịaka gaa na ebe obi Prairie dị gị nso. N'ime ngwa ahụ, ngalaba kaadị obere akpa dijitalụ "MyPrairie" na-ahapụ gị ịchekwa ozi kọntaktị ndị dọkịta gị niile, ọgwụ gị, allergies, ozi mkpuchi na kọntaktị ụlọ ahịa ọgwụ.
Download maka iPhone
Ọkwa nke enweghị ịkpa oke: English
Enyemaka asụsụ: Deitsch | Deutsch | Español | Français | Hmoob | Italiano | Polski | Tagalog | Tiếng Việt | Русский | اُردُ | العربية | हिंदी | Lao | 한국어 | omenala Chinese
Prairie Cardiovascular bụ Dọkịta na APC nke nlekọta ahụike na ọgwụgwọ obi n'ọtụtụ ebe na etiti Illinois. Nzukọ anyị na-enye ndị dọkịta gbasara obi kacha mma na steeti ahụ, yana izi ezi ịwa ahụ ama ama na ndụmọdụ ọkachamara gbasara nchegbu metụtara obi. Anyị na-anwale ma na-agwọ ọrịa maka mgbaàmà obi niile a na-ahụkarị dịka mgbu obi, ọbara mgbali elu, ọbara mgbali elu, ntamu, obi mgbawa, cholesterol dị elu, na ọrịa. Anyị nwere ọtụtụ ebe gụnyere isi obodo dịka Decatur, Carbondale, O'Fallon, na Springfield.
Mmemme Enyemaka Ego HSHS
© 2020 Prairie Cardiovascular - Ndị dọkịta nke Prairie